Edebere ọnụahịa doro anya nke OnePlus 6 na mmalite ya | Gam akporosis
Ruo izu ole na ole akụkọ banyere OnePlus 6 akwụsịbeghị ịbịa. Akara ọhụrụ nke akara ndị China bụ otu n'ime ekwentị ndị kacha atụ anya na ọnwa ndị a. Ọ dabara nke ọma, nchere ahụ dị mkpụmkpụ. Ebe ọ bụ na ụbọchị ole na ole a ga-egosipụta ya na London. Ọ ga-abụ mgbe ahụ ka anyị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na leaks ndị a niile bụ eziokwu.
Ikwu okwu banyere leaks, taa obu uzo ohuru. Ọ bụkwa ihi ụra dị mkpa. N'ihi na a gbanyelarị ụgwọ nke ụdị abụọ nke OnePlus 6 a. Otu akụkụ nke amabeghị maka ekwentị.
Enweela otutu ntule banyere ego ndị ngwaọrụ ahụ ga-enwe. Ebe ọ bụ na ụfọdụ mgbasa ozi kwuru na ihe nlereanya a ga-abụ oke ọnụ. Ihe doro anya kpatara ọtụtụ obi abụọ na ụjọ n'etiti ndị ọrụ. N'ihi na amaara ama ama ama ama ama ama na amaala nke China site n'inwe ego di ala karie ndi ozo.
N'ikpeazụ, anyị nwere ọnụahịa nke OnePlus 6 n'etiti anyị, anyị nwere ozi ọma. Maka na agaghị enwe mmụba ọnụahịa dị ịrịba ama. Ọ bụ ezie na ọnụahịa ahụ na-etolite ntakịrị ntakịrị, ha ka dị ka ndị nke ọgbọ gara aga nke ekwentị ndị ahụ. Ya mere, ha emezuwo n'akụkụ a. Ndị a bụ ọnụahịa nke OnePlus 6:
64GB ekwentị ekwentị: Euro 519
OnePlus 6 na 128 GB nke nchekwa dị n'ime: Euro 569
Ya mere, anyị nwere ike ịhụ na enwebeghị ọtụtụ mgbanwe ma e jiri ya tụnyere OnePlus 5T, ebe ọ bụ na ọnụahịa nke ụdị nke gara aga bụ euro 499 na 559 n'otu n'otu. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ na esemokwu dị ntakịrị. Ya mere, ekwentị ahụ ga-anọgide na-adị ọnụ ala karịa ọtụtụ ndị na-asọmpi ya.
Ozi oma, ebe ọ bụ na ọnụahịa abụwo otu n'ime ike nke ekwentị OnePlus. Ihe na egosiputara na ihe nlere a ma gha enyere ya aka ire nke oma na ahia maka onwa ole na ole na abia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Felitere ọnụahịa nke ụdị abụọ nke OnePlus 6